Rebranding: mienzaniso | ECommerce nhau
Encarni Arcoya | | Kutengeswa kweIndaneti
Kana brand ikatora nguva, kana kupotsa vateereri vayo, nzira yainorongedza zvigadzirwa zvayo kana kuti inopa masevhisi ayo. Unofanira rebranding. Mienzaniso yeizvi yakawanda. Mamwe emhando dzinonyanya kuzivikanwa akatambura, vamwe nekubudirira, uye vamwe nekutadza kwavo.
Naizvozvo, pachiitiko ichi, tinoda kukuudza nezvemimwe mienzaniso yekugadzira rebranding saka unogona kuona kuti dzimwe nguva kugadzirisa kunogona kutungamirira kukubudirira. Unoda kuziva zvakawanda pamusoro peizvi?
1 Chii chinonzi rebranding
1.1 Branding, rebranding uye restyling
2 Kana rebranding yaitwa
3 Rebranding: mienzaniso chaiyo uye yakabudirira
Chii chinonzi rebranding
Ndisati ndakupa mienzaniso, zvakakosha kuti iwe uzive chaizvo zvatiri kureva nezwi iro. Kushambadzira ndiko kuzivikanwa kwerudzi: logo yako, meseji, kurongedza kwezvigadzirwa ... Muchidimbu, ndizvo zvese zvinopa hunhu kumhando kana kambani pachayo.
Nekudaro, nekufamba kwenguva kunogona kuita kuti chifananidzo icho brand ichi chive chekare. Chimwe chinhu chakaita sekuzvarwa mu60s uye kuda kuvandudza muna 2022. Kunyange zvazvo mafashoni achidzoka, iyo brand pachayo yaizotarisa yekare.
Zvakanaka ipapo Chero nzira yekushambadzira inosanganisira yakazara kana chidimbu gadziriso yechiratidzo chemhando inonzi rebranding.
Tinokupa muenzaniso. Fungidzira kuti wagadzira kambani mugore ra2000 uye logo yayo imari yepeseta. Sezvaunoziva, panguva iyoyo euro yakanga yatotanga kutenderera. Funga kuti hauna kuchichinja. Muna 2022 mapeseta haasisipo uye ivo chete vanovarangarira vanopfuura makore makumi mana (zvichida makore makumi matatu). Zvakadaro, vateereri vako vavanovavarira vane makore makumi maviri kusvika makumi matatu. Ungave wakabudirira here nechiratidzo ichocho? Chinonyanya kuitika ndechokuti kwete.
Naizvozvo, kuita shanduko yelogo ndiyo imwe yenzira dzekudzokorora.
Branding, rebranding uye restyling
El branding uye isu takatotsanangudza rebranding kare uye iwe unenge waona kuti iwo akasiyana mazwi kunyangwe ane hukama kune mumwe nemumwe. Uye ndezvekuti hapazove nerebranding pasina branding.
Nenzira yekupfupisa, tinogona kutaura izvozvo branding ndiko kuzivikanwa kwerudzi uye kugadzira patsva ndiko kugadziridzwa kweiyo brand identity.
Asi zvakadini nekugadzirisa? Zvakafanana here nekuita rebranding?
Kana usati wambonzwa izwi rekuti restyling kare, unogona kuziva kuti rinoreva brand redesign. Asi kunyanya kumufananidzo. Mune mamwe mazwi, kuchinja kwechiratidzo, kuchinja kwemhando yemavara, nenzira yakarongeka ... Asi pasina kuchinja mavara kana maitiro.
Tinogona kutaura kuti rebranding inonyanya kunangana nekutsanangura patsva chitupa chekuona uye kugadzirisa kuzivikanwa kwekambani. Nemamwe mashoko, restyling chikamu chekugadzirazve.
Kana rebranding yaitwa
Rebranding haigone kutorwa kureruka, uye haigone kuitwa chero nguva yaunoda sezvo inogona kukanganisa.
Somuenzaniso, funga kuti une zita uye kuti uri kuedza kuita kuti rizivikanwe. Asi pa6 months unochinja logo nekuti hauzvide. Uye zvakare. Idzo shanduko dzese dzinopengesa vatengi nevashandisi nekuti havakuzive. Kana ivo vane hukama hwemufananidzo kune bhizinesi rako uye iwe uchichinja, nekuona ivo havakuzive, uye izvo zvinoreva kuti unofanirwa kusimudzira zvakare nekudyara kuti usvike kune vateereri vako.
Nokudaro, rebranding inokurudzirwa chete:
Kana makambani atopinda maturity phase, ndiko kuti, pavanenge vatozivikanwa uye vanoda shanduko kuti varambe vachiwedzera.
When hapana hukama hwekuzivikanwa kwechiratidzo nevatengi. Zvakanaka nekuti maitiro achinja, nekuti zvave zvechinyakare, nezvimwe. Mune izvo zviitiko zvinokurudzirwawo kumisikidza rebranding zano.
Ramba uchifunga kuti izvi hazvisi kungochinja uye ikozvino. Izvo zvinodikanwa kuita ongororo kuti ugone kusarudza iyo yakanyanya shanduko, uye maitiro ekuzviita, kuitira kuti vatengi varambe vachitiziva uye vachirondedzera iwo mufananidzo mutsva uye chitupa chekuzivikanwa nekambani yanga ichishandira zvakadaro. makore mazhinji.
Rebranding: mienzaniso chaiyo uye yakabudirira
Sezvo isu tichiziva kuti muenzaniso unokosha kupfuura mazwi ese atinogona kukuudza nezve rebranding, pazasi tichaona yakabudirira mienzaniso uye makambani chaiwo. Chokwadi vanopfuura mumwe vanopedzisira vakurira iwe.
Iwe unogona kunge usingazvizive, hachisi chinhu chinodiwa nemhando yacho zvakanyanya, asi iwe unofanirwa kuziva kuti, payakazvarwa, chiratidzo chekutanga chayaive nacho yaive yemufananidzo waNewton pasi pemuapuro, neapuro pamusoro. wemusoro wake .
Zviri pachena Iyo logo haina kufarirwa, uye gore rimwe chetero (tiri kutaura nezve 1976) vakaishandura kuita silhouette yeapuro ine mavara emuraraungu. Kuwedzera kubudirira uye zvakanyanya kushamisa. Kubudirira kwakakwana.
Muchokwadi, kubvira 1976 logo yayo yakangochinja maererano nemuvara, asi iyo yekutanga apuro inoramba iripo.
Iwe unogona kunge usina kuziva zvakawanda, uye iwo muenzaniso wekugadzirisa pane rebranding. Asi hezvo zviripo.
Kana iwe ukaona yekutanga Youtube logo, iwe uchaona izvozvo chikamu chechipiri chezwi, Tube, chaive mubhokisi dzvuku, zvichireva chiteshi. Asi paakachinja bhokisi iroro, akazvibvisa ipapo uye akatora nzvimbo pamusoro peshoko, akaisa kutamba pairi.
Kubudirira? Chokwadi ndechekuti kana. Zviri pachena, zviri pachena pane zviri kuitika uye zviri nyore.
Imwe mhando yakashanduka kubva payakazvarwa muna 2010 ndeiyi. Iye zvino iwe unoshandisa iyo nguva dzose asi muna 2010 yakanga ine logo mbiri shanduko, uye imwe muna 2011. Isati yave yekare kamera (uye kuti panguva iyoyo pakanga patova nemazuva ano). Mushure Vakachichinja kuita chinyoreso chakareruka, uye gore rakatevera vakachipa chitarisiko chakaita seganda, kuunza mufananidzo padhuze uye kugadzira kutarisa kwakasiyana.
Kana tikaenzanisa logo yezvino neiyi ye2010 hapana akawanda ekuenzanisa, kunze kwekutarisa uye kupenya.
Pane zvimwe zvakawanda zvatingataure kwauri: McDonald's, Google, Nescafé, Ikea, Disney ... Unoziva nezve rebranding uye mienzaniso yavo? Tizivise mumashoko uye tiudze zvaunofunga, kana zvaive zvakanaka kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Rebranding: mienzaniso
Kutanga sei bhizinesi repamhepo
Outbrain: chii ichocho